काठमाडौं । डेस्टिनि क्रिएसनले जापानमा आयोजना गरेको ‘तीज फेस्टिवल २०१९’ सम्पन्न भएको छ । क्रिएसनले नेपालबाट कलाबारहरूलाई बोलायर भव्य रुपमा तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीमाझ रमाइलो गर्नुका साथै संस्कृतिको जगर्ने हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली संस्कृति...
जर्जियाका प्रधानमन्त्रीले दिए पदबाट राजीनामा
जर्जिया । जर्जियाका प्रधानमन्त्री ममुका बाख्ताजले सोमबार राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । संसद्ले सरकार ढलाउने निश्चित देखेपछि उनले राजीनामाको घोषणा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । विकासको प्रारुप बनाइरहेकै बेला आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । राजीनाम...
एटिएम ह्याक प्रकरण : रकम साट्ने तीन मनी एक्सचेन्ज सञ्‍चालक पनि पक्राउ
काठमाडौं । चिनियाँ नागरिकले एटिएम ह्याक गरेर झिकिएको रकम साटिदिने मनी एक्सचेन्ज सञ्‍चालक तीन नेपाली पनि पक्राउ परेका छन् । शनिबार चिनियाँ ह्याकरले राजधानीका विभिन्‍न बैंकका एटिएमबाट ह्याक गरेर निकालेको रकम साट्ने तीन मनी एक्सचेन्ज सञ्चालकलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा ठम...
बाँकेमा गोली प्रहार गरी डाका मुद्दाका फरार अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले बाँकेमा गोली हानेर एक जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । डाँका चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादी नरेन्द्र न्यौपानेलाई प्रहरीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको राँझाचोक नजिकै गोली प्रहार गरि पक्राउ गरेको हो । भारतबाट नेपाल आइरहेको सूचनाका आधारमा बर्दियाको बाँसगढी पुगेको इलाका प्...
धितोपत्र बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै : आज पनि दोहोरो अङ्कमा गिरावट
काठमाडौं । आइतबार दोहोरो अङ्कले आरोलो लागेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज (सोमबार) पनि ओरालो नै लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १४.४५ बिन्दुले घटेर एक हजार १७०.३४ मा पुगेको छ । आज नेप्से १.२२ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.९८ अर्थात १...
काठमाडौं । टेलिभजिन कार्यंक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने र र निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीविरुद्ध हालिएको अदालतको मानहानी मुद्दा खारेज भएको छ । प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएकोबारेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा कञ्चनपुरमा मुद्दा विचारधीन रहेकाले सार्वजनिक रुपमा बोल्न नमिल्ने र आफ्नो भाइ दिलिपसिंह विष्टलाई अ...
१६ गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने ५ पक्राउ
सुरुंगा । आर्थिक प्रलोभनमा परि १६ गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेसहित ५ जनालाई प्रहरीले गएराति पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका खरिदार न्यौपानेसहित भद्रपुर निवासी टेकबहादुर गुरुङ, लोकराज बराल, प्रेमरा...
के पत्रकार बन्न परीक्षा पास गर्नुपर्ने हो ? यस्तो आयो प्रस्ताव
काठमाडौं । पत्रकारको योग्यता तोक्न सांसदहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । आइतबार सत्तारुढ दल नेकपाका १४ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा...
एक सर्भेले भन्यो चिनियाँ मागमा कमि आयो
बेइजिङ । चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी दुई वटा सर्भेक्षणले चिनियाँ सामानको मागमा कमी आएको देखाएका छन् । अमेरिकासँग व्यापार र प्रविधि विषयमा जारी व्यापार युद्धले चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको हो । चिनियाँ व्यावसायिक अखबार काइसिनद्वारा विश्लेषणात्मक खरिद सूचकले गत जुलाईको ४९.९ विन्दुबाट ५०...
एटिएमबाट पैसा चोरी प्रकरण : मलेसिया भाग्न खोज्ने अर्का व्यक्ति विमानस्थलबाट पक्राउ
काठमाडौं । एटिएम ह्याक गरी रकम चोरीमा संलग्न थप एकजना चिनियाँ मुलका फ्रान्सेली नागरिक पक्राउ गरेका छन् । ३६ वर्षीय सु लुस लीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाएको छ । परिसरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका...
कति सुरक्षित छन् नेपाली बैंक ?
काठमाडौं । शनिबार मध्यरातमा काठमाडौंका विभिन्‍न बैंकका एटीएम ह्याक गरी करिब दुई करोड बराबरको रकम चोरी भयो । राति नै बैंकका कर्मचारीले शंकास्पद गतिविधि भएको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरी राति नै पाँच जना चिनीयाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भयो । सोमबार फेरि सोही समूहका एकजनालाई पक्राउ गर्&zw...